Salamo 27 Toeram-bavaka mba ho fiarovana | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Salamo 27 Toeram-bavaka ho fiarovana
Salamo 27 Toeram-bavaka ho fiarovana
Salamo 27: 1 Iaveh no fahazavana sy famonjena ahy; iza no hatahorako? Jehovah no herin'ny fiainako; iza no hatahorako? 27: 2 Raha ny ratsy fanahy, eny, ny fahavaloko sy ny fahavaloko, dia avy hihinana ny nofoko, dia tafintohina izy ka lavo. 27: 3 Na dia misy tafika mitoby hiady amiko, tsy hatahotra ny foko; na dia misy ady aza no hiady amiko, dia hatoky ihany aho.
Ny bokin'i Psalms dia toy ny boky vavaka mahery vaika toy izany ao amin'ny Baiboly, ny herin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny salamo dia tsy ho reraka mihitsy. Androany isika dia hijery ny vavahady faha-27 vavaka ho fiarovana. Manelingelina anao izany fahavalo?, mijaly ve ianao faharatsiana ao an-tokantrano or mpanao ody ratsy ve ny tokantrano? Ity salamo ity dia salamo tena mahomby handresena ny herin'ny fahavalonao amin'ny fiainanao. Mamporisika anao aho hivavaka amin'ity resaka vavaka ity amin'ny finoana ary manantena Andriamanitra fa hampiseho ny tenany mafy amin'ny fiainanao. Ny drafitra rehetra ataon'ny fahavalon'ny fiainanao sy ny hoavinao dia tsy ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny Tompo no hazavana sy anao famonjena, noho izany, tsy mila matahotra fahavalo ianao. Ny Tompo no fiarovana mafy amin'ny fiainanao, koa tsy misy fahavalo manisy ratsy anao. Ity dia teny mahery avy amin'ny Tompo ho anao, mamporisika anao aho hamaky ny bokin'ny salamo 27 manontolo, alohan'ny hanombohanao manao an'ity vavaka ity ho fiarovana. Raha tsy azonao ny Tenin'Andriamanitra momba anao dia azonao atao ny mampitombo azy io amin'ny fiainanao. Tsy misy devoly afaka mandratra zanak'Andriamanitra, tsy misy ody na ody afaka manimba ny zanak'Andriamanitra. Raha miangona hamely anao ny fahavalonao, dia ho tafintohina izy rehetra, satria momba anao Jehovah. Eo aminao mandrakariva ny fiarovany. Tiako ianao hivavaka amin'ity teboka vavaka 27 ity miaraka amin'ny toe-tsaina mpandresy. Mivavaha izany amin-kerimpo amin'ny fahalalana feno tsara fa tsy mety iharan'ny devoly ianao. Ny drafitra rehetra ataon'ny fahavalo momba ny fiainanao dia tsy maintsy ho diso anio amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zana-tsipika maizina rehetra nalefa tany aminao dia hiverina amin'ny mpandefa amin'ny anaran'i Jesosy. Voaro sy voatahy amin'ny anaran'i Jesosy ianao.
1. Ny Tompo no hazavana sy famonjena ahy, ka tsy mandà ny matahotra ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy aho
2. Ny Tompo no fiarovana mafy amin'ny fiainako, noho izany, tsy misy fiadiana fahavalo handresy ahy amin'ny anaran'i Jesosy
3. Ambarako fa tsy misy ratsy nalefa tamiko avy amin'ireo fahavalo handresy amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy
4. Nambarako fa ny nofo rehetra mihinana sy mihinana ra taorian'ny fiainako dia ho tafintohina ary hianjera amin'ny anaran'i Jesosy
5. Ny lehilahy sy vehivavy ratsy fanahy rehetra mivory hamely ahy dia hiparitaka amin'ny afo amin'ny anaran'i Jesosy
6. Ry Andriamanitry ny Ady, mitsangàna ary ario izay rehetra miady manohitra ny tanjoko
7. Izay rehetra maniry ahy ho faty, dia ho faty amin'ny anarako Jesosy
8. Izay rehetra nahafoy ahy tamin'ny fahoriako dia ho menatra amin'ny fiakarako amin'ny anaran'i Jesosy
9. Ray ô, afaho aho tsy amin'ny sitrapon'ny fahavaloko amin'ny anaran'i Jesosy
10. Ray ô, aza avela hihomehy farany amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy ny fahavaloko.
11. Avelao ny ratsy fanahy horoahina amin'ny haben'ny fahotany, amin'ny anaran'i Jesosy.
12. Tompo ô, ho menatra sy ho menatra ny fahavaloko rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Ry Tompo, avelao ny fahavaloko rehetra ho menatra tampoka ary avelao hiverina aminy ny zana-tsipikany amin'ny anaran'i Jesosy.
14 Mitsangàna, ry Tompo, amin'ny fahatezeranao, ka manandrata ny tenanao noho ny fahatezeran'ny fahavaloko.
15. Tompo ô, avelao ho tapitra ny faharatsian'ny ratsy fanahy.
16. Tompo ô, amboary ny fitaovam-pahafatesan'ny mpanenjika ahy.
17. Tompo ô, aronjano ireo mpanenjika ahy.
18. Tompo ô, avelao latsaka ao an-davaka nolaviny ny fahavalon'ny fanahiko.
19. Tompo ô, avelao ho eo an-dohany ihany ny fampahoriana ny mpampahory.
20. Tompo ô, avelao hidina eny an-dàlany ny fanaovana herisetra ataon'ny fahavalo.
21. Tompo ô, avelao hianjera eo anoloanao ny fahavaloko.
22. Tompo ô, avelao hisambotra ny tongony ny harato amin'ny fahavalo.
23. Avelao ny ratsy fanahy hosamborina amin 'ny fitaovana izay noheveriny, amin' ny anaran 'i Jesoa.
24. Tompo ô, tapaho ny sandrin'ny ratsy fanahy amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
25. Enga anie hitombo ny alahelon'ny fahavaloko amin'ny anaran'i Jesosy
26. Mitsangàna, ry Tompo, soriso ny fahavalo ary afaho amin'ny olon-dratsy amin'ny anaran'i Jesosy ny aiko
27 Avelao ny kotrokorana sy ny havandra ary ny vainafo mirehitra sy ny tselatra ary ny zana-tsipìka avy amin'ny Tompo hampiely ny herin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy.
28. Tompo ô, omeo ahy ny tendan'ny fahavaloko.
29. Aoka ny mpikomy rehetra hotapoka kely tahaka ny vovoka amin'ny rivotra, amin'ny anaran'i Jesosy.
30. Avelao atsipy toy ny loto eny an-dalambe izy ireo, amin'ny anaran'i Jesosy
Previous lahatsoratraVavaka amin'ny fahagagana 31 ho fanampiana ara-bola
Next lahatsoratra30 Vavaky ny alina matanjaka ho fiarovana
Pascale March 30, 2021 Ao amin'ny 10: 52 am
Je rappelle qu'en ce moment je vis une période problem où l'ennemi me persécute de toute part.
Et comme je l'ai dit plus haut je me suis réveillée dimanche matin avec ce psaume dans ma tête: Une réponse à ma prière. Même comme tout semble encore flou, l'oppression étant à son comble, je ne puis que te rendre grâce Seigneur Jesus. Merci Seigneur dia manome toky cette, handrava ny victoire sur mes ennemis🙏🏾🙏🏾💪🏾💪🏾
Ny vavaka Hahazoana fanampiana amin'ny vola